के मसला साँच्चिकै ‌स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो ? #masalaSideEffect • Health News Nepal
मसलाहरु पूर्णतया प्राकृतिक खानेकुरा हुन् । मिसावट रहित मसला पूर्णरुपले प्राकृतिक भएकोले स्वास्थ्यलाई फाइदा नै पुर्याउँछ ।
काठमाडौं, ११ पौष २०७७
✍️ डा.ओम मुर्ति अनिल , बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ
मसलाको बारेमा हाम्रो समाजमा धेरै गलत धारणाहरु विद्यमान छन् । मसला हानिकारक हो, खानु हुन्न, जस्ता धारणहरु गलत पनि हुनसक्छ । हाम्रो जानकारी अनुसार जुनसुकै प्राकृतिक खानालाई उचित तरिकाले पकाएर प्रयोग गरिएमा स्वास्थ्यलाई हानिको सट्टा फाइदा नै गर्दछ ।
मसलाहरु पूर्णतया मसलाहरु पूर्णतया प्राकृतिक खानेकुरा हुन् । मिसावट रहित मसला पूर्णरुपले प्राकृतिक भएकोले स्वास्थ्यलाई फाइदा नै पुर्याउँछ । खानेकुरा हुन् । मिसावट रहित मसला पूर्णरुपले प्राकृतिक भएकोले स्वास्थ्यलाई फाइदा नै पुर्याउँछ । प्रत्येक मसलाको आफ्नै महत्वहरु हुन्छन् । यस्ता मसलाले कुनै न कुनै रुपले हाम्रो स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर गरेको हुन्छ ।
तर धेरै मसलाको प्रयोग गरेमा वा यसलाई धेरै बेरसम्म प्रशस्त तेल वा घ्यूसँग भुटेमा, यसमा भएको लाभकारी पदार्थ नष्ट हुनसक्छ र शरीरलाई हानि पनि गर्न सक्छ । विशेष गरी धेरै मसला र तेलको प्रयोग आमाशयलाई हानि पुरयाउन सक्छ र ग्यास्ट्राइटिसको समस्या देखापर्न सक्छ ।
हाम्रो जानकारीमा मसलाको उचित प्रयोगले मुटुलाई हानि गर्दैन । खानालाई स्वादिष्ट बनाउन मसला र कागतिको प्रयोग गरेर नुनको प्रयोगमा कटौति गर्नु मुटुरोगीकोलागि फाइदाजनक हुनसक्छ । स्वस्थ मानिसकोलािग पनि यस्तो खानेकुरा फाइदाजनक हुन्छ ।
प्राचिन कालदेखि नै हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमा मसलाको प्रयोग विभिन्न रुपमा हुदै आएको छ । हाम्रो पूर्वजहरुमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मुटुरोगको प्रकोप थोरै भएको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
त्यसैले यी प्राकृतिक. खानेकुरालाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्नुको सट्टा प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । तर यसको शुद्धता, मात्रा र प्रयोगको तरिकामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । आयुर्वेद शास्त्रमा पनि विभिन्न मसलाहरुको स्वास्थ्यलाभ वर्णन गरिएको छ ।
Tags: Corona Virus #Covid19DiseaseDr.Om Murti AnilPublic HealthSide effects
आँखाको उपचार सेवा भरतपुर अस्पतालमा‌ पनि शुरु हुँदै #EyeTreatment
Pingback: जाडोमा छाला जोगाउन डा.विकास पैाडेलको सल्लाह #ColdSeason • Health News Nepal
Pingback: फागुनको अन्तिम साताबाट सर्वसाधारणले खोप लगाउन पाउने #Covidvaccine • Health News Nepal
Pingback: विश्वप्रसिद्ध मुटुरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डा. मलखलाल श्रेष्ठ ‘अनरेरी ओभरसिज फेलोसिप’बाट सम्म
Pingback: काेराेनाका सामान्य लक्षण वा मिल्दा जुल्दा लक्षण देखियो भने यी १० उपायहरु अपनाउनुहोस् • Health News Nepal
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पहिलो पटक ११ महिने शिशुको कलेजो प्रत्यारोपण #Livertransplantation